Published Date: 15 novembre 2021
Tontosa androany Alatsinainy 15 Novambra 2021, tao amin’ny Lapan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) ao Fenoarivo Atsinanana (Faritra Analanjirofo) ny fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Filoha vaovao. Nanome voninahitra ny delegasiona notarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza.
Fanafainganana ny asam-pitsarana, ady amin’ny kolikoly, fanatrarana ny taha 70/30. Mitondra ny fandaharan’asany, ny Filoha eo anivon’ny TPI, Rtoa MAMONJISOA Mathieu Andréa.
Fanatrarana ny tanjona : 1 volana hamitana ny asam-pitsarana
Mazava ny tarigetra dia ny fanafainganana ny asam-pitsarana. Maromaro ireo tanjona napetraky ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Anisany ohatra, ny fanatrarana ny taha 70/30 mialoha ny fiafaran’ny taona (70% an’ireo voafonja no tokony ho voatsara, raha 30% sisa no tokony hiandry fitsarana). 1 volana katroka no mila hamitana ny asa, satria hanomboka ny 15 Desambra 2021 ny fialan-tsasatry ny Fitsarana.
Nivoitra ireo nandritra ny lahateny nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana, androany Alatsinainy 15 Novambra 2021 teto Faravohitra taorian’ny fananganan-tsaina. Satria moa mbola manao fidinana ifotony any amin’ny Faritra Atsinanan’ny Nosy iny, ny Mpitahiy ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, dia ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana no nisolo tena azy, sy nitarika ny fotoana androany.
Toy izao ny lahateny nataon’i Rtoa RABY SAVATSARAH Gabrielle Ain’Harimanga.
Fidinana ifotony ao Toamasina ataon’ny Delegasiona tarihin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Fitsidihana ny Fonjabe, famoriana ireo mpiara-miasa, fandraisana ireo lehiben’ny fikambanana maro.